Inethiwekhi yeentlungu zesifuba
I-Arterial Artery Disease
Iklinikhi yeVein yeVaricose
Amabali ekwabelwana ngawo
Fumana UGqirha kunye ne-APC
UNdwendwelo lweOfisi ebonakalayo ngoku iyafumaneka ePrairie Cardiovascular- FUNDA NZULU
Iimaski zobuso ziyafuneka ngexesha lakho lokuqeshwa
Khumbula ukuzisa imaski yobuso kwidinga lakho!
Iimaski zisafuneka kuzo zonke iindawo zePrairie Heart e-Illinois.
Uphando. Iqinisekisiwe. Inkokeli.
I-#1 yeengcali zokuhlaselwa yintliziyo.
Cwangcisa iSiqendu sakho ngoku!
Umthambo, Umthambo Hamba
Musa ukuva isifo semithambo ilize!
Thatha uVavanyo lweMpilo yeVein
Ukugqithisa Intliziyo Yakho.
Yile nto siyenzayo apha.
Fumana ugqirha wakho ngoku!
UNdwendwelo lweOfisi ebonakalayo ngoku iyafumaneka ePrairie Cardiovascular
Ngexesha lentlekele ye-COVID-19, iPrairie Cardiovascular iyakuvuyela ukubonelela ngosuku olufanayo nangosuku olulandelayo utyelelo oluqinisekileyo lokhuseleko kunye nokwenza lula izigulana zethu.
Ukucwangcisa idinga, nceda ufowune
Fumana ugqirha wasePrairie
Fumana uGqirha wentliziyo yasePrairie ngoku
Fumana ugqirha wakho
Usuku olunye kunye noSuku olulandelayo lweNgxowa-mali luyafumaneka
Iinkokeli kukhathalelo lweNtliziyo
Xa ufuna ngaphezu kogqirha, xa ufuna ingcali yentliziyo, i-Prairie Heart inempendulo. Ukusuka kwi-cholesterol ephezulu ukuya kuxinzelelo lwegazi oluphezulu, ii-aneurysms ukuya kwi-arrhythmia, iintlungu zesifuba ukuya kukhathalelo lwentliziyo, iingcali kwi-Prairie Heart zilungele ukuma ecaleni kwakho kulo lonke uhambo lwakho olusingise kwintliziyo esempilweni.
ISHEDYULI YOKUQESHWA KWAKHO NGOKU
Gcwalisa le fomu ingezantsi.
I-Prairie I-Cardiovascular yinkokeli yelizwe ekuboneleleni umgangatho ophezulu, we-state-of-art kunye nokunakekelwa kwe-vascular. Ukwenza idinga nooGqirha bethu abakumgangatho wehlabathi kunye nee-APCs akunakuba lula.
Ngethu FIKELELA Prairie Inkqubo, isicelo sakho sokuqeshwa sithunyelwa ngokukhuselekileyo kwiqela lethu labongikazi abaqeqeshwe kakhulu kwintliziyo. Baza kukubonelela ngoncedo lobuqu ekwenzeni idinga kunye noGqirha kunye ne-APC eyona ikufaneleyo ukunyanga intliziyo yakho kunye neemfuno zemithambo.
Emva kokugcwalisa ifomu, i-imeyile ekhuselekileyo iya kuthunyelwa kwiqela lethu le FIKELELA Prairie abongikazi. Uya kufumana umnxeba wokubuyela phakathi kweentsuku ezi-2 zokusebenza.
Ukuba uvakalelwa kukuba le yimeko kaxakeka, nceda utsalele umnxeba kwa-911.
Ngokuzalisa ifom, uyavuma ukufumana unxibelelwano oluvela kwi-Prairie Heart.
I-Zip Code *
Umhla wokuzalwa * MM123456789101112 / DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
UGqirha okhethwayo kunye ne-APC (ukhetho)
Indawo ekhethwayo (ukhetho)
Isizathu sokuba ucele idinga *
Okanye sitsalele umnxeba
Ukuba ukhetha ukuthetha nomntu ngokuthe ngqo, umongikazi unokufikelelwa ngokufowunela 217-757-6120.
Amabali ayasikhuthaza. Amabali asinceda ukuba sizive sinxibelelana nabanye. Amabali ayinxalenye yento enkulu kunathi. Ezintliziyweni zabo, amabali asinceda siphilise. Simema wonke umntu ukuba afunde amabali angezantsi kwaye akhuthaze izigulane zethu kunye neentsapho zabo ukuba babelane ngebali labo le-Prairie.
Izandla kuphela Uqeqesho lweCPR
Xa uSteve Pace wawa phantsi, umfazi wakhe uCarmen wacofa u-9-1-1 kwaye ngoko nangoko waqalisa ukucinezelwa kwesifuba. Wayengaqinisekanga ukuba usebenzisa ubuchule obufanelekileyo, kodwa oogqirha, abongikazi kunye nabaphenduli bokuqala bayavuma ukuba isenzo sakhe esikhawulezileyo sasindisa ubomi bukaSteve, samgcina ephila de yafika i-ambulensi.
Iphefumlelwe libali lokucinga ngokukhawuleza kukaCarmen, iqela kwi-Prairie Heart Institute liqalise "Ukugcina isantya - i-CPR yezandla kuphela" uqeqesho lokuzisa ubuchule obulula bokusindisa ubomi kuluntu.
Izandla kuphela i-CPR inconywa yi-American Heart Association kubantu ababukeleyo abangaqeqeshwanga kwi-CPR. Kwakhona kunconywa kwiimeko xa umhlanguli engakwazi okanye engafuni ukunika umoya wokungena emlonyeni.
Ukubukela ividiyo yePace, ukufunda ngakumbi okanye ukucela iseshoni ye-CPR yezandla kuphela kwindawo yakho, nceda iqhosha elingezantsi.
Amajita omsebenzi amatsha aqhelekile. Kodwa khawufane ucinge uqala umsebenzi omtsha nge-pacemaker entsha-eyokuqala e-United States neyesibini kwihlabathi jikelele ukuba ifakwe kusetyenziswa itekhnoloji yophando ukunyanga izingqi zentliziyo ezikhawulezayo eziyingozi. [...]
Ukufakwa endaweni yeVali yeAortic
Bendifuna ukuthatha umzuzwana ndithi ENKOSI kwiqela le-TAVR !!! Babebalasele kumanqanaba amaninzi! Yonke le nto yaqala ngo-Epreli ka-2013. Utatazala wam othandekayo, uBilly V. Williams, wayenendawo yokufa isiqaqa kwaye kamva waxelelwa ukuba yayinxulumene nentliziyo yakhe. Emva kovavanyo oluninzi, izigqibo zaba […]
ICABG, Ukwenziwa kweCatheterization yentliziyo, Iintlungu zesifuba
Ndilahlekelwe ngutata wam ngoFebruwari 4, 2017, iintsuku nje ezi-5 emva komhla wakhe wokuzalwa we-89. Njengomntwana ndandisoloko ndimbona utatam njengomntu ongenakoyiswa. Ebengumkhuseli wam, umqeqeshi wobomi bam, iqhawe lam!! Njengomntu omdala, ndiye ndaqonda ukuba angangasoloko ekho kodwa bendisazi okoko nje ehamba lo […]
Into yokugqibela oyifunayo lutyando olufuna ixesha elide lokubuyisela. Kwintliziyo yasePrairie, sisebenza ngokukhethekileyo kuqhaqho olutsha, olungenako ukwenza utyando olungapheleli nje ekwenzeni umsebenzi, kodwa lukubuyisela ekubeni nguwe ngokukhawuleza kuneenkqubo zesintu.
Funda ngakumbi kwaye ufumane iindlela zokupheka
Ukhathalelo Kufuphi neKhaya Lakho
Sisikelelwe kukuhlala kwindawo enoluntu olomeleleyo apho siziva sikhululekile kwaye sanelisekile. Kodwa xa sinengxaki yentliziyo esenokufuna ukhathalelo olukhethekileyo, ngokufuthi kuthetha ukuba sijamelene nokhetho lokushiya uluntu lwethu okanye okubi ngakumbi, ukubekela bucala ukhathalelo. Oku akunjalo xa ukhathalelo lwakho olukhethekileyo lunikezelwa ngooGqirha basePrairie cardiologists. Ifilosofi yethu kwi-Prairie Heart Institute kukuhambisa ukhathalelo oluninzi kangangoko kunokwenzeka kwindawo. Ukuba oko akunakwenzeka, ngoko kwaye kuphela emva koko, kuya kucetyiswa ukuhamba.
Fumana uGqirha kunye ne-APC ekufutshane nawe
Ukongeza kwiindawo eziphantse zibe yi-40 ezijikeleze i-Illinois apho i-Prairie cardiologists ibona izigulana kwindawo yesibhedlele sendawo, kukho iinkqubo ezikhethekileyo e-Springfield, e-O'Fallon, e-Carbondale, e-Decatur, e-Effingham naseMattoon.
Ukuba ufumana iimpawu zokuhlaselwa yintliziyo, Dial Don't Drive.
Nceda utsalele umnxeba ku-911 kwaye ulinde uncedo.
Cofa, Musa ukuqhuba
Kulo nyaka kuphela, abantu baseMelika abazizigidi ezisisi-1.2 baya kubandezeleka ngenxa yentliziyo engxamisekileyo. Ngelishwa, malunga nesinye kwisithathu sezi zigulana ziya kubhubha ngaphambi kokuba zifike esibhedlele ngesizathu esinye esibalulekileyo – ukulibaziseka ekufumaneni unyango olubalulekileyo.
XA KUSENZEKA IINTLUNGU ESIFUBENI, YIQHUBA – HLALA UDAWULA, UNGAZE UQHUBE.
Zininzi kakhulu izigulana zokuhlaselwa yintliziyo ziziqhubela okanye zibe nelungu losapho zibaqhubele esibhedlele. Okuvuyisayo kukuba, kukho indlela yokunceda ukunciphisa ezi nkcukacha-manani zitshabalalisayo. "Kumalunga nexesha" yinkqubo eyenziwa yi-Chest Pain Network ye-Prairie Heart Institute yase-Illinois (PHII), edibanisa izibhedlele kunye nee-arhente ze-EMS ngokukhawuleza kunye nokunyamekela izigulane zentlungu yesifuba. Soloko ufowunela u-911 ngoncedo lwezonyango - ungaze uziqhubele- xa iimpawu zesilumkiso sokuhlaselwa yintliziyo zisenzeka.
Xa ufumana iimpawu zokuhlaselwa yintliziyo, isekhondi nganye oyigcinayo ingathetha umahluko phakathi komonakalo ongenakulungiseka wentliziyo okanye imeko enyangekayo, kunye nobomi okanye ukufa. Ngokucofa u-911 kuqala, unyango luqala ngexesha abaphenduli bakaxakeka bafika ngalo. Iingcali ze-EMS kunye nabanye abaphenduli bokuqala banoku:
Hlola imeko yakho ngoko nangoko
Thumela ngoko nangoko izinto zakho ezibalulekileyo kunye nolwazi lwe-EKG kuso nasiphi na isibhedlele esingaphakathi kweNethiwekhi ye-PHII Chest Pain
Lawula unyango kwi-ambulensi
Qinisekisa ukuba iqela lentliziyo yesibhedlele liza kulinda kwaye lilungele ukufika kwakho
Ukukhawulezisa ngokufanelekileyo ixesha ukusuka kwisifo sentliziyo ukuya kunyango
Iingcebiso zokuLungiselela uTyelelo lwakho
Qiniseka ukuba sinazo iiRekhodi zakho zonyango
Ukuba ugqirha wakho ubhekiselele kwi-Prairie Cardiovascular, uya kuthi uqhagamshelane nathi ngefowuni okanye uthumele iirekhodi zakho kwiofisi yethu. Kubaluleke kakhulu ukuba sifumane iirekhodi zakho zonyango. Ngaphandle koko, i-cardiologist yakho ayiyi kukwazi ukukuvavanya ngokufanelekileyo kwaye kunokuba yimfuneko ukucwangcisa kwakhona ukuqeshwa kwakho de ezo rekhodi zifunyenwe. Ukuba uye wazithumela, kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho kwaye ulungiselele ukuba iirekhodi zakho zithunyelwe kwiofisi yethu ngaphambi kokutyelela kwakho okucwangcisiweyo. Imbali yakho yonyango yangaphambili ibalulekile kuxilongo nakunyango.
Yiza nalo lonke ulwazi lwakho lwe-inshurensi kunye neLayisensi yakho yokuqhuba
Xa usenza idinga kunye nathi, uya kucelwa ngolwazi lwakho lwe-inshurensi eya kuthi emva koko ingqinwe sithi ngaphambi kokuqeshwa kwakho. Kufuneka uze nekhadi lakho le-inshurensi kunye nelayisenisi yakho yokuqhuba kwidinga lakho lokuqala. Ungafumana ulwazi oluthe vetshe malunga nemigaqo-nkqubo yethu yezemali ngokufowunela iSebe lethu lezeMali yezigulana.
Yiza nawo Onke Amayeza Akho
Nceda uze nawo onke amayeza akho kwimigqomo yawo yokuqala xa usiza eofisini. Qinisekisa ukuba ugqirha wakho uyazi malunga neziyobisi zonke ozithathayo, kubandakanywa neziyobisi ezithengiweyo kunye namayeza esintu. Elinye ichiza linokunxibelelana nelinye, kwezinye iimeko lidala iingxaki ezinzulu zonyango. Ungafumana ifomu elula yokudwelisa onke amayeza akho Apha.
Gcwalisa iiFom eziNtsha zoLwazi lwesigulana
Olu lwazi lubaluleke kakhulu kwaye luya kuyikhawulezisa inkqubo ekufikeni kwakho e-ofisini. Iikopi zeefomu zakho zingafunyanwa ngezantsi. Ungathumela iifomu ngefeksi kwiofisi yethu kwangethuba kule nombolo 833-776-3635. Ukuba awukwazi ukuziprinta iifom, nceda utsalele umnxeba kwiofisi yethu kule nombolo 217-788-0706 kwaye ucele ukuba iifom zithunyelwe kuwe. Ukuzalisa/okanye ukujonga iifomu phambi kokuba uqeshwe kuya kongela ixesha.
Iphepha leMyalelo loGunyaziso
Isaziso soBucala boBucala
Uviwo Lwakho: Yintoni Onokuyilindela
Emva kokuba ugcwalise ubhaliso lwakho kwaye nombhalisi unolwazi lwakho oluyimfuneko kunye neenkcukacha ze-inshurensi, umongikazi uya kukubuyisela kwigumbi lovavanyo apho aya kuthatha uxinzelelo lwegazi kunye ne-pulse.
Umongikazi uyakuthatha nembali yakho yezonyango ukufumanisa hayi kuphela ukuba ngawaphi amayeza owathathayo kodwa yintoni, ukuba ikhona, i-allergies onokuthi ube nayo; luhlobo luni lwezigulo zangaphambili okanye ukonzakala onokuthi uye wafumana; kunye naluphi na uqhaqho okanye ukuhlala esibhedlele onokuthi ube unalo.
Uyakubuzwa kwakhona malunga nempilo yosapho lwakho kubandakanya naziphi na iimeko zelifa ezinokunxulumana nempilo yakho yentliziyo. Okokugqibela, uya kubuzwa malunga nemeko yakho yomtshato, umsebenzi kunye nokuba usebenzisa okanye awusebenzisi icuba, utywala okanye naziphi na iziyobisi. Kungakunceda ukubhala phantsi zonke iziganeko zonyango kunye nemihla kwaye uze oku kunye nawe kutyelelo lwakho.
Nje ukuba umongikazi egqibile, ugqirha wentliziyo uya kudibana nawe ukuphonononga imbali yakho yezonyango kwaye enze uviwo lomzimba. Emva koviwo, uya kuxoxa ngeziphumo zakhe kunye nawe kunye nosapho lwakho kwaye acebise naluphi na uvavanyo olongezelelweyo okanye izicwangciso zonyango. Nceda uzive ukhululekile ukubuza ugqirha wentliziyo nayiphi na imibuzo onokuba unayo ngeli xesha. Oogqirha bethu basebenzisa abaNcedisi booGqirha kunye nabongikazi abaqeqeshwe ngokukodwa kulawulo lwentliziyo ukuze babone izigulana ngamaxesha athile. Ukuba kunjalo, utyelelo lwakho luya kuhlolwa ngugqirha wakho.
Kwenzeka Ntoni Emva Kotyelelo Lokuqala?
Emva kotyelelo lwakho kunye ne-cardiologist, iofisi yethu iya kuthumela zonke iirekhodi zentliziyo, iziphumo zovavanyo, kunye neengcebiso zonyango kugqirha wakho othumelayo. Kwezinye iimeko, sinokucwangcisa iimvavanyo ezongezelelweyo oya kufuna ukubuya kuzo. Sinoluhlu lweemvavanyo kunye neenkqubo-uninzi lwazo alungeneleli-ezincandweni zethu esingazange sibe nalo kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ukusinceda sichonge iingxaki kwaye sizithathele amanyathelo ngokukhawuleza, kwangaphambi kwaso nasiphi na isiganeko sentliziyo.
Ukuba unemibuzo, nceda ubize umongikazi we-cardiologist yakho. Ngenxa yomthamo wethu weefowuni zemihla ngemihla, zonke iinzame ziya kwenziwa ukubuyisela umnxeba wakho ngexesha elifanelekileyo. Nayiphi na ifowuni efunyenwe emva kwentsimbi yesi-4:00 emva kwemini iya kubuyiselwa ngosuku olulandelayo lomsebenzi.
Uncedo ngokubanzi luyafumaneka
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga notyelelo lwakho oluzayo, nceda uqhagamshelane.
Ukucela ukukhululwa kolwazi okanye iirekhodi
Iinkqubo zeSebe lokuThobela zonke izicelo zokukhululwa kolwazi lwesigulana. Ukunceda izigulane ekufikeleleni ulwazi lwabo lwezempilo (iikopi ezinzima zeerekhodi zonyango), izigulane kufuneka zizalise ngokupheleleyo i-Prairie Cardiovascular Consultants. Ugunyaziso lokuSebenzisa kunye/okanye ukuDiza ifomu yoLwazi oluKhuselweyo.
Zonke iifom zoGunyaziso ezigcwalisiweyo, ezisayiniweyo nezinosuku zinokubuyiselwa ku:
Attn: iSebe lokuThobela
OKANYE I-imeyile: HIPAA2@prairieheart.com
OKANYE ifeksi ngqo kwiSebe lokuThobela: 833-776-3635
Ugunyaziso lokuSebenzisa kunye/okanye ukuDiza iiNkcukacha eziKhuselweyo
Iphepha leMiyalelo yoGunyaziso
Iphepha eliGunyaziweyo leSatifikethi esihlobene
Zeziphi iintlawulo ezinxulumene nokucela iirekhodi zonyango?
I-PCC yenza hayi izigulane ze-bill, ezinye izibonelelo zempilo, ooGqirha kunye ne-APCs, okanye iSebe lezoLawulo lweMicimbi ye-Veterans (VAA) ngokucela iikopi zeerekhodi zonyango lwesigulane.
Ndizifumana njani iikopi zeerekhodi zam zonyango?
UGunyaziso lokuSebenzisa/ukuDiza ulwazi lweMpilo oluKhuselweyo kufuneka lusayinwe sisigulana okanye ummeli wesigulane.
Ukufumana uGunyaziso lokuSebenzisa / ukuDiza ifomu loLwazi lwezeMpilo oluKhuselweyo cofa Apha.
Nceda nqakraza Apha ngemiyalelo yendlela yokugcwalisa uGunyaziso lokuSebenzisa / ukuDiza uLwazi lwezeMpilo oluKhuselweyo.
Ukuba awukwazi ukuyiprinta ifom, nceda Qhagamshelana nathi ngokusebenzisa iinkcukacha zoqhagamshelwano.
Nje ukuba ugunyaziso olugqityiweyo, olusayiniweyo nomhla lufunyenwe liSebe lokuThobela, ulwazi oluceliweyo luya kuthunyelwa kumamkeli.
Luphelelwa nini ugunyaziso?
Ugunyaziso luya kuphelelwa kwiintsuku ezingama-60 emva komhla wokusayinwa. Ungangenisa umhla owahlukileyo kumhlathi wesithathu kwiphepha lesibini ukuba ufuna isigunyaziso sisebenze ngaphezulu kweentsuku ezingama-60. Ugunyaziso aluyi kusebenza ngalo naliphi na ixesha elingaphezu konyaka omnye.
Ndiluthumela phi ugunyaziso lwam olugqityiweyo?
Nceda uthumele zonke izigunyaziso ku:
Ingqalelo: ISebe lokuThobela
Ithini inombolo yefeksi yokuthumela ugunyaziso lwam olugqityiweyo?
Nceda uthumele ngefeksi isigunyaziso sakho ku-833-776-3635.
Ngaba ndingathumela i-imeyile yogunyaziso lwam olugqityiweyo?
Ewe. Ugunyaziso olugqityiweyo lungathunyelwa nge-imeyile ku HIPAA2@prairieheart.com
Yintoni endiyidingayo ukuze ndifumane iirekhodi zonyango kwisigulane esiswelekileyo?
Ulwazi lwempilo yomntu oswelekileyo lunokukhutshwa ngesicelo esibhaliweyo esivela kumabi okanye umlawuli wempahla yomntu oswelekileyo okanye kwi-arhente emiselwe ngumfi.
Kuthekani ukuba akukho arhente yomfi?
Ukuba akukho mabi, umlawuli, okanye ummeli kwaye umntu akachasanga ngokuthe ngqo ukubhengezwa kweerekhodi zakhe zonyango ngokubhaliweyo ngoko ke iinkcukacha zezempilo zomntu oswelekileyo zinokukhutshwa xa efumana le fomu ilandelayo: Ifomu yeSiqinisekiso seSihlobo esiGunyaziweyo
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana iirekhodi zam zonyango?
Ukukhutshwa kwerekhodi yezonyango, kunokuthatha ukuya kwiintsuku ezingama-30 ukufumana iirekhodi zakho. Sisebenza izicelo ngendlela ezifunyenwe ngayo. Nangona kunjalo, ukuqeshwa okuzayo, iinkqubo, kunye neemeko zikaxakeka ziqwalaselwa njengesicelo se-STAT.
Singakwazi ukujongana nesicelo kwangolo suku, sinikwe abasebenzi kwaye ulwazi luphelele kwaye luyafumaneka. Ungaqhagamshelana neSebe Lokuthobela ukukhangela ubume besicelo sakho.
Ngubani oqhuba ukukhutshwa kwerekhodi yam yonyango?
ISebe Lokuthobela liziqhubela zonke izicelo zeerekhodi.
Ngaba ndingasayina ifom yogunyaziso kwaye ndithathe iirekhodi zonyango ngaxeshanye?
Nceda uqhagamshelane neSebe Lokuthobela ukwenza amalungiselelo okulungiswa kweerekhodi zonyango, ixesha lokulandwa, kunye nokusayina isigunyaziso. ISebe lokuThotyelwa kweMithetho liya kufuna ixesha elaneleyo lokujongana nesicelo kunye nokuqinisekisa ukukhululwa okufanelekileyo kweenkqubo zolwazi lwesigulana zigqityiwe.
Ngaba omnye umntu ngaphandle kwesigulana unokuthatha iirekhodi zam zonyango?
Ewe, iirekhodi zinokukhutshelwa nabani na isigulana esimchazayo kugunyaziso. I-ID yefoto iyafuneka xa uthatha iirekhodi zonyango.
Ndingasebenzisa isicelo esifanayo ukuthumela iirekhodi kwiindawo ezahlukeneyo?
Hayi. Sifuna ugunyaziso olwahlukileyo kwindawo nganye.
Ngaba ndifuna ugunyaziso olwahlukileyo kugqirha ngamnye we-PCC?
Hayi, i-PCC ineRekhodi yoNyango ye-Electronic enye. Zonke iirekhodi zakho zonyango zigcinwe kwitshathi enye.
Kutheni kufuneka isigunyaziso sibhalwe phantsi kunye nomhla wokutyikitya?
Ukuqinisekisa isigunyaziso sesigulana sokukhulula ulwazi lwezempilo.
Ukuba ndikhuphela i-Prairie Heart Institute yase-Illinois APP kwifowuni yam okanye ithebhulethi okanye ukubhalisa kwincwadana yakho yeendaba, ulusebenzisa njani ulwazi lwam?
Asiqokeleli naluphi na ulwazi lomntu siqu kwi-Prairie Heart App. Ulwazi olufakayo lugcinwa kuphela kwifowuni yakho okanye isixhobo esiphathwayo kwaye aluqokelelwanga okanye lugcinwe yiPrairie Cardiovascular or Prairie Heart Institute of Illinois nangayiphi na indlela. Ukuba ukhetha ukungena kwileta yethu yeendaba, yidilesi ye-imeyile kuphela egcinwe ngenjongo yokukuthumelela incwadana yeendaba. I-Prairie Cardiovascular kunye ne-Prairie Heart Institute yase-Illinois ayinakuze ithengise idilesi yakho ye-imeyile kwaye unokuphuma nangaliphi na ixesha.
Khuphela i-Prairie App
I-Prairie Heart Institute App yenza kube lula ukuhlala uqhagamshelwe. Ngokucofa iqhosha, fumana ugqirha we-Prairie Heart okanye uzise izalathiso eziya kwindawo ye-Prairie Heart ekufutshane nawe. Ngaphakathi kwi-app, icandelo lekhadi le-wallet yedijithali elithi "MyPrairie" likuvumela ukuba ugcine zonke iinkcukacha zoqhagamshelwano zoogqirha bakho, amayeza akho, izinto ezikwalana nazo, ulwazi lweinshurensi kunye noqhagamshelwano lwekhemesti.
Isaziso sokungacaluli: IsiNgesi
Uncedo Lolwimi: Deitsch | Deutsch | Spanish | French | Hmoob | Italian | menyezelisa | Tagalog | Vietnamese | Русский | اُردُ | العربية | हिंदी | lao | Korean | Chinese Traditional
U-Prairie Cardiovascular nguGqirha kunye ne-APC yokhathalelo lwempilo yentliziyo kunye nonyango kwiindawo ezininzi kumbindi we-Illinois. Umbutho wethu ubonelela ngezona gqirha zentliziyo zibalaseleyo kurhulumente, ngokuchanekileyo ngotyando olwaziwayo kunye neengcebiso zobuchwephesha kwiinkxalabo ezinxulumene nentliziyo. Siyavavanya kwaye sinyange ngokwezonyango zonke iimpawu eziqhelekileyo zentliziyo ezifana neentlungu zesifuba, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ukumbombozela, ukubetha kwentliziyo, icholesterol ephezulu, kunye nesifo. Sineendawo ezininzi ezibandakanya izixeko ezikhulu ezinjengeDecatur, Carbondale, O'Fallon, kunye neSpringfield.
Inkqubo yoNcedo lwezeMali yeHSHS
© 2020 Prairie Cardiovascular- OoGqirha basePrairie